Isidingo ukufinyelela njalo oqine ku-inthanethi kukhona evamile. kusukela epilweni yangamalanga yesimodeni Kunzima ukucabanga ngaphandle kwalo, ngoba i-Internet isiyindlela i umsizi ebalulekile indoda ezindaweni eziningi: esifundweni somuntu, emsebenzini, zokuxhumana. I-World Wide Web njalo elokhu ivela, enikeza amathuba amasha, futhi musa ukusebenzisa amathuba anjengalawa akunakwenzeka. Manje cishe wonke umuntu amakhompyutha, omakhalekhukhwini kanye namanye amadivayisi ongazisebenzisa ukuxhuma kunethiwekhi.
Ukuthuthukiswa wireless technology kuvula amathuba amasha up, ngoba wonke amadivayisi ayisekho abopha kunoma endaweni eyodwa. senethiwekhi yeselula 3G ukunikela ngokwanele okusezingeni eliphezulu zedatha osuvele unikeze ezinhle, uxhumano ezinzile. Njengoba kokubili opharetha bamaselula esitshalweni kuze kube sesizukulwaneni sesithathu amazinga aqala zasakazekela kudivayisi nabo - ne modems ekhethekile. Naphezu kweqiniso lokuthi ngokusobala they are kasibili alihlukile, kodwa izindlela ezihlukene. Ngakho umbuzo uwukuthi, indlela imodemu 3G kungcono ukukhetha?
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi ngezindlela eziningi ukuthi kungenzeka imodemu zincike inethiwekhi uqobo. Nalokhu, zikhona izinkinga ezinkulu uma kufanele banqume ukuthi iliphi 3G imodemu. Oyisizukulwane sesithathu amanethiwekhi amaselula kukhona elokhu ivela, ngakho ikhono lazo ukuze zikhule kahle. Nokho, lokhu kwenzeka kuphela theory. Ngo umkhuba, kuncike kuphela opharetha.
Idatha yokudlulisa izinga e 3G
Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe ijubane ukudluliswa kwedatha kumanethiwekhi ezikhona. Kule kuncike impendulo yombuzo okuyinto engcono 3G imodemu. Ubuncane isivinini elimangalelwe 3.6 Mbit / sec. Inkomba muhle kakhulu, kodwa okungokoqobo Kuthi ezahlukene. Ekusebenteni, izinga atholakale umsebenzisi kuxhomeke ezicini eziningi, ngokuyinhloko ukulayisha inethiwekhi. Iningi ihora rush kwenzeka ebusuku lapho izinkomba ngokulambisa ukufinyelela isigamu iyini kufanele kube. Futhi kuzwakala akuxhomekile kudivayisi uqobo.
Eqinisweni, uma umuntu nesithakazelo esikhulu kulokho okufanekiselwa kuhle kakhulu ukuba uwuthenge eye- 3G, kungase kube ngcono ukugxila kuphela amazinga ehlongozwayo kanye izinga yokuxhumana ye-opharetha. Nokho, izinkampani amaselula sin ukukhangisa yamanga, ukuthengisa modems nge speed amangalelwe afika ku 7 noma 14 Mbit / s. Nokho, iqiniso liwukuthi amanethiwekhi ngokwabo azilona neze ukwazi ukunikeza amathuba ezifana idinga ukuba sifeze sesimanje imishini, futhi ezindaweni eziningi, ngisho emadolobheni amakhulu lokhu akukenzeki. Lokhu kusho ukuthi akufanele babuze lokho imodemu 3G kungcono, ngoba eqinisweni bonke ukusebenza ngokulinganayo.
3G mobile Inthanethi
Nokho, e-inthanethi mobile izidingo kutintfo futhi kwezinye izimo kumane nje Irreplaceable. Ukufinyelela mahhala nge-Wi-Fi iphuzu, futhi, akuyona yonke indawo, futhi kusho ukuthi 3G uhlala kwento. Kwezinye izimo, ekubonisa imiphumela emihle kakhulu. Speed kuyahlukahluka kakhulu kuye ngokuthi isikhathi sosuku: ukusebenza okuhamba phambili uphatha ukufinyelela ubusuku ekuseni. Futhi, eziningi incike ikhwalithi enamathela.
Abantu abaningi lapho uthenga ephathekayo noma netbook kudivayisi wokuthenga 3G kwenethiwekhi. Ukweluleka okuyinto imodemu kungcono ukuba netbook, kubalulekile ukuba sicabangele isimo kumanethiwekhi, hhayi izici lobuchwepheshe zedivayisi. Izinto sokunquma kukhona izindleko yamanani kanye nekhwalithi Ukusabalala. Nakuba ungafunda kabanzi mayelana amathuba 3G edolobheni noma esifundeni sisonke, okuzodingeka ukusebenzisa internet, njengoba kwamanye amadolobha sebeqala kakade ukuba wasungula imishini emisha.
"IPad uvaliwe, ukuxhuma iTunes" - yini okumele ngiyenze? iPad: iphutha kulungiselelwa imfundo
I-Tablet Samsung Galaxy Note N8000 Sibutsetelo imodeli kanye Google +
'Lokobeyz Uvune' izindlela. imfundo
Toxic yegilo adenoma: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa
Iqhaza lama-bacterium awusizo ngokwemvelo. Lokusakaza amagciwane uhlobo